शौचालय जान्छु भनेर क्वारेन्टाईनबाट भा'गे'का गुल्मीका एक मृ',त भेटिए ? - Filmy News Portal Of Nepal
शौचालय जान्छु भनेर क्वारेन्टाईनबाट भा’गे’का गुल्मीका एक मृ’,त भेटिए ?
सरकारले कोरोना सं’क्रमि’तलाई क्वारेन्टाइनमा राखेपछि व्यस्थीत नहुदा त्यहीबाट शौचालय जान्छु भनेर क्वारेन्टाईनबाट भा’गे’का गुल्मीका एक मृ’,त भेटिए ? कोरोना सर्ने ड’र पनि छ । र, व्यवस्थनपा चुस्त नहुदा बस्ने मानिसहरुले दु:ख पाईरहेका छन् । शनिबार क्वारेन्टाइनबाट हरा’एका गुल्मीमा एक व्यक्ति आ’त्मह’त्या गरेको अबस्थामा फे’ला परेका छन् ।
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका–४ दिगामस्थित आदर्श माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका ५६ वर्षीय चन्द्रबहादुर परियारले क्वारेन्टाईनबाट नजिक रहेको रुखमा पासो लगाएर आ त्मह त्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । क्वारेन्टाईनमा बसेरका १२ घन्टा नपुग्दै उनले आ त्मह त्या गरे ।
उनले किन आ त्मह’त्या गरे भन्नेबारे अ’नुस’न्धान भईरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । उनी भारतबाट शनिवार बिहान मात्र आइपुगेर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । यस अघि परियार अरू ६ जनासँगै दिल्लीबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको उनका साथीहरुले बताएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार शनिबार साँझ परेपछि शौचालय जान्छु भनेर नजिकैको झाडीतर्फ गएका थिए । उनी झाडीबाट निकै बेरसम्म नआएपछि खो’जी सुरु भयो । खोजीको क्रममा क्वारेन्टाईनबाट २ सय मिटर टाढाको रूखमा झु न्डिएको अवस्थामा उनको श ब फेला परेको पनि प्रहरीले बताएको छ ।